Wararka Maanta: Isniin, Jan 7 , 2020-Gabar 23 Jira oo Soomaali ah oo loo dhaariyey Xubin golaha Deegaanka ST Louis Park Minnesota.
Dadwaynaha dagan xafadaa ayaa aad u soo dhaweeyey doorashada Naadiya oo dhacday bishii Nofenbar 2019, shalay dhaarinteediina dadka Soomaaliyeedee dagan xafadaa ayaa aad ugu farxsanaa kulankana ka soo qaybgalay.
Doorashada Naadiya oo 23 jir ah waxay dhiiragalin u tahay dhalinta Soomaali Americanka ee ku dhaqan dalkaan inay qayb ka qaadan karaan siyaasada golayaasha kala duwan ee gobolkaan.
Haboon Abdulle oo madax ka ah ururka Women Organizing Women (WOW) ayaa HOL u sheegtay in guul ay u tahay Gabdhaha Soomaaliyeed tusaalana u noqon karto kuwa Mustaqabalka inay ka qayb qaataan siyaasada ,Naadiya doorashadedana waxay noo tahay wax wayn urur ahaan , waxaana mustaqabalka rajeenaynaa in aan soo saarno gabdho badan .
Naadiya Maxamed ayaa ah gabar xijaaban ,waxayna ka qayb qaadanaysaa maamulada go’aan kaarista maamulka dowladda hoose ee xaafada St Lois Park oo ay maamulaan 6 qof oo la soo doorto.
1/7/2020 1:05 AM EST
Waxaa sanadkii lixaad loo kaxeeyey safar cumro iyo booqashada goobaha taariikhiga ah ee ku yaal magaalooyinka Makah iyo Madiino ardayda kaalimaha hore ka galay tartanka quraanka ee Imaam shaatibi ee sanadlaha ah ee lagu qabto gobolka Minnesota.